BWC058 - OMG Mini Body Worn Camera - Fanamafisana sary an-tsary - Vahaolana OMG
★ Sensor: OS05A10, nanohana ny HDR
★ Fijery malalaka Wide: 130 degre
★ Encoding video H.265 / H.264 - 20-25 Hrs ho an'ny 32GB
★ 14-nm ambany CMOS herinaratra
★ Tohanana 32-256GB Fahatsiarovana-trano.
★ Manohana 2.4G / 5.8G Wifi / 3G / 4G / GPS (Safidy)
★ Manohana ny ekena ny tarehy (tsy azo atao)
Ny firaketana horonantsary 1080P HD dia momba ny famantaranandro 0.8, izay antsasaky ny fanjifana herinaratra amin'ny vahaolana Ambarella A7, ary ny 1 / 4 amin'ny vahaolana MTK.
Ny bateria 4200mAh dia afaka mirakitra hatramin'ny ora 14 misy video h.265 1080p ihany.
Ny teknolojia fiampangana PWM dia afaka manome 2 Amp faingana haingana ary hisorohana ny fihenan-kafatra izay manitatra ny fiainan'ny bateria.
Bitika kely ambany, famaritana avo.
Ny fakan-tsarin'ny vatantsika miaraka amin'ny 3D mivalo ny fihenam-bava (MCTF) sy ny H.265 (HEVC) video-koditra dia afaka manome 50% off bitrate ho an'ireo mpifaninana izay mampiasa ny H.264 (AVC) ihany. Ary ny teknolojian'ny Smart HEVC dia mety hahatratra bitrate tena ambany dia 80% off miaraka amin'ny sehatr'asa mipetraka. 32GB dia afaka mamonjy horonantsary 25 Hatramin'ny horonantsary horonantsary.
1080P (1440P Max) horonantsary lavitra tsy misy dikany lavitra dia afaka manome antsipiriany bebe kokoa noho ny horonantsary 720p.
Fifandimbiasana haingana, fiatoana haingana
Atsaharo ny 6s.
3.5 ora mamaly haingana amin'ny famandrihana cradle (bateria 3500mAh (havaozina ho 4200mAh tsy voatery), adapter herinaratra 2A);
Vitsy kely (83.2 * 54.8 * 29.8mm), lanjan'ny lanjany (145g).
Ny mpandaha-teny mahay tsy mitsaha-mitombo tsara dia manome ny kalitaon'ny feo tsara hatrany na dia efa natsipy tany anaty rano aza.
Ny fiheverana tsara kokoa ny fahitana ny alina dia tratran'ny fiparitahana glaso mba hisorohana ny lelavin'ny tselatra;
Famahana horonantsary avo hatramin'ny 1440P (2560 × 1440) miaraka amin'ny bitrate mora vidy;
Ny logo manokana dia azo alefa ao anaty horonan-tsarimihetsika;
Fitaovana Dewarp mba hanitsiana ny fanovana ny sary;
Mihamafana ny mari-pana amin'ny hafanana amin'ny -30 ka hatramin'ny 60 degrees Celsius;
Ny ora fanoratana 8 dia azo tanterahana amin'ny -30 degrees Celsius miaraka amin'ny batterie normaly.
AI (azo atao)
Ny 4 core ARM Cortex A53 dia manampy amin'ny fanatanterahana ny asan'ny AI, ohatra, ny fanekena ny endrika. Izany dia afaka manohana ny fianarana lalina, haingana kokoa sy marina kokoa ny fankatoavana ny tarehimarika, ary ny tarehimarika tarehimarika dia mety ho 10,000 amin'ny database data database.
Afaka miara-miasa amin'ny server server rahona izy amin'ny fanekena ny fampisehoana sy ny fampitahana (eo am-pandrosoana).
Fotoana fanombohana <6 Segondra (Manomboka amin'ny fahefana ka hatramin'ny firaketana)
fiteny Anglisy / Sinoa
Interface GUI (Interface an'ny mpampiasa sary)
Video Video Input OS05A10, tsy manohana fakan-tsary ivelany
Video Output 2 inch feno HD LCD
Fanapahan-kevitra an-tsoratra 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720
Firaketana firaketana Fanamafisana ny horonan-tsary sy Audio
Horonan-tsarimihetsika tsy miankina amin'ny 2 ho an'ny firaketana an-toerana sy ivelan'ny sasantsasany
famatrarana H.264 (MP / HP Level 5.1) /H.265 (MPU 5.0)
Audio Input-peo Ny fandraisana 1x MIC, fidirana an-tsofina an-tariby azo antoka ivelany
Interface Audio ivelany Takelaka 2.5mm ho an'ny fitaovana finday, mikrôfo ary PTT
famatrarana Ny format PCM (AAC)
Horonam-peo Tohizo ny firaketana an-tsoratra fotsiny, ny famantaran-dàlana iray eo amin'ny fehezan-tsoratra Audio sy Video
Video dingana Video Resolution 2560×1440, 1920×1080, 1280×720
sary 1920 × 1080 ～ 8640 × 4752
anatn'ny Tohano ny fakana sary mandritra ny fandraisam-peo sary mitovy amin'ny fandraisam-peo video）
Storage Natsangana tamin'ny karatra TF 16GB (tsy voatery ho 32 ～ 256GB)
Light IR Hatramin'ny 10 Meter ao amin'ny 0 lux miaraka amin'ny sary hita maso
Fahazavana tselatra Fanampiana hijerena amin'ny alina
Laser Hidio afovoany sary na manondro
Fomba roa Intercom Cluster Intercom Fanohanana fifandimbiasam-pahefana misy eo anelanelan'ny terminal (ampiasaina amin'ny fitaovana 4G / 3G)
Fifandraisana amin'ny sehatra Fanohanana fifandraisan-davitra eo amin'ny serivera sy ny fitaovana amin'ny terminal (ho an'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
Lens HOV > 120 °
fanairana SOS Hampandrenesina amin'ny sehatra ny press key SOS (ho an'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
Seranan-tsambo COM USB 1x USB, ho an'ny famandrihana, fifandraisana amin'ny PC, ampifandraiso ny fakantsary HD ivelany
Network Protocol (Tsy voatery) TCP / IP, RTSP, RTMP, GB / 28181 (ho an'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
3G / 4G (Tsy voatery) namboarina tamin'ny modely 3G / 4G (FDD-LTE / WCDMA / GPRS) (ho an'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
Wifi (tsy voatery) Tsy voatery, tohano ny maody WIFI Client sy AP
Nify manga (tsy voatery) Tohano ny Blue Tooth
GPS GPS (Tsy voatery) GPS / GLONASS (tsy voatery), ny toerana sy ny hafainganana dia azo ampiasaina amin'ny firaketana an-toerana sy ny fahitana lavitra, ny kalitaon'ny mari-pamantarana tsara manomboka amin'ny hatsiaka <25 segondra
mikirao praogramanao Fanekena ny endrika Fahafantarana lalina ny tarehy, lisitra mainty ao an-toerana na fanekena rahona (Tsy voatery)
OSD Burn In Adikao amin'ny daty, ny fotoana, ny ID, ny tompon'andraikitra, ny toerana, ny haingam-pandeha
Overwrite Afaka alefa na kilemaina
Playback Tohano ny famoaham-peo eo an-toerana ny horonan-tsary, fikarohana horonan-tsarimihetsika amin'ny fotoana, fanairana, sns
Fampiasana sary lavitra Tohano ny famerenana an-tserasera ary mandefa an-telefaona (amin'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
Cluster Intercom Tohano ny antso roa, Cluster call (ho an'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
Hafainganam-pandeha Playback Fanohanana avy amin'ny 1 mankany 128
Pre / Post- Firaketana Ny famoahana ny horonan-tsarimihetsika 20 isam-bolana sy ny fanoratana sary
De-Warp Tohano ny de-Warp alohan'ny encoding (> 120 degre), tohano ny zoom 8x digital maximum
Safe Mode Voafetra ho an'ny horonan-tsary sy horonam-peo, sary na zavatra hafa
Rakitsoratra Encryption Fanohanana Ny firaketana ny rakitra, horonan-tsarimihetsika dia azo ampiasaina amin'ny mpilalao manokana
Log Manorata fepetra fanalahidy, mametraha fiovana, fisehoan-javatra, fanairana sy fampahalalana hafa
Software Hplayer Alefaso ny rakitra horonan-tsary ao amin'ny solosaina ary diniho ny fampahalalana momba ny data ao amin'ny rakitra.
CMSV6 Fandefasana mivantana / mivantana / mandeha / mivantana / fanaraha-maso / fanaraha-maso an-tariby, sns. (Ho an'ny 4G / 3G ihany koa)
fanavaozana Fikojakojana ny firmware Firmware dia afaka manavao na USB na Internet (afa-tsy amin'ny fitaovana 4G / 3G)
Fiaraha-miasa hafanana -30-60 ℃
Other Charad Cradle Famerana haingana any @ 2A, fandefasana data USB
Time Mampifanaraka ny daty sy ny ora miaraka amin'ny GPS, Internet, PC
Dual Video Stream Horonan-tsarimihetsika tsy miankina amin'ny 2 ho an'ny firaketana an-toerana sy ivelan'ny sasantsasany
toerana misy anao Hamerenao amin'ny fametrahana ny fametrahana ny default
famantarana Famoahana, Idle, Video Record, Snap, rakitra Audio
Battery fahaiza 3500mAh ho an'ny 1080p30 fandraisam-peo mitohy hatramin'ny 14h, ho an'ny 4G maharitra lavitra hatramin'ny 7.5h, fenoina ao anatin'ny 3h
Safidy 2: 4200mAh ho an'ny 1080p30 fandraisam-peo mitohy hatrany amin'ny 15h, ho an'ny 4G maharitra maharitra hatramin'ny 9ora, fenoina ao anatin'ny 3.5h;
Bateria mpanampy tsy misy
Weight 145g （tsy misy clip)
7766 Total Views 7 Views Today